Omume nke ndị na-emepụta ihe na ndị na - ebunye ya - China
A na-eji ihe na-eme ka a ghara ịma jijiji na-amata vibration aeolian nke onye nduzi nke usoro nnyefe, yana waya waya, OPGW, na ADSS. Ifufe na-ebute vibration nke ikuku na-eduzi bụ ihe zuru ụwa ọnụ ma nwee ike ibute ike ọgwụgwụ nke onye nduzi n'akụkụ mgbakwunye ngwaike. Ọ ga-ebelata ọrụ ndụ nke eriri ADSS ma ọ bụ OPGW.
A na-ejikarị ihe ndị na-eme ka a ghara ịma jijiji na-achịkwa vibration aeolian nke eriri ADSS na wires ụwa tinyere wiwi ala (OPGW). Mgbe etinyere ya n’elu mmiri na-eduzi jijiji, mmegharị nke ịdị arọ ga-ewepụta ụdọ nke eriri nchara ahụ. Igha nke eriri ahụ na-eme ka wires nke ọ bụla jikọta ya n'otu n'otu, si otú a na-efesa ike ya.
E nwere ụdị nsogbu ọdịiche abụọ dị na ngwaahịa jera
1) Gburugburu vibration damper
2) Ebe nchekwa mmiri nke Stockbridge
A na-eji mmiri na-eme ka mmiri na-ekpuchi mmiri na-eguzogide ihu igwe, plastik na-anaghị emebi emebi, ndị na-agba mmiri nwere akụkụ buru ibu, nke na-emepụta helikopta maka eriri, na igwe anaghị agba nchara, aluminom, na ngwongwo igwe. A ga-ahọrọ ụdị ọdịdị vibration dị ka ihe a kapịrị ọnụ na ihe onye nduzi chọrọ.
Usoro Jera na-enye nkwonkwo eriri na ngwa niile eji arụ ọrụ n'oge FTTX na-arụ ọrụ netwọkụ, dịka ogwe osisi, eriri igwe anaghị agba nchara, nko, nkedo, eriri nchekwa slack na wdg.
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ịmatakwu nkọwa banyere ihe ndị a na-eme mkpọtụ.